चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडाैँ भेडाच्याङ्ग्रा ल्याउने क्रम बढ्दाे| The Margin Media
चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडाैँ भेडाच्याङ्ग्रा ल्याउने क्रम बढ्दाे
काठमाडाैँ - दसैँ नजिकिँदै जाँदा काठमाडाैँमा भेडा, च्याङ्ग्रा तथा खसी भित्र्याउने क्रम पनि बढ्दै गएकाे छ । सरकारले आजबाट सहुलियत खसीबोका बिक्री सुरु गरेसँगै निजी व्यवसायीहरूमा पनि बिक्री वितरणको उत्साह बढेको देखिएकाे छ ।
उपर मुस्ताङदेखि ३०० च्याङ्ग्रा ल्याई काठमाडाैँमा बिक्री गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायी दिनेश थापाले यसपटक भेडाच्याङ्ग्रा केही महँगाे भएकाे बताए । थापा भन्छन्, 'उपर मुस्ताङदेखि बेनीसम्म ५ दिन च्याङ्ग्रालाई हिँडाएर बेनी देखि गाडीमा ल्याउनु पर्छ । उपर मुस्ताङबाटै गाडीमा हाल्दा धेरै च्याङ्ग्रा मर्ने गर्छन्', बाबुको पेसालाई आत्मसात गरेका दिनेश भन्छन्, 'विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपालि च्याङ्ग्राको मूल्य निकै बढेको छ । यसपालि च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण चाइनाबाट आयात नभएकोले हाे ।'
सिन्धुपाल्चोकबासी अर्का व्यापारी अनिश बस्नेत भन्छन्, '५०० च्याङ्ग्रा ल्याएको छु, नवमीसम्ममा सबै बिक्री भै सक्छन् ।' ३०-६० केजीसम्म पाइने यी च्याङ्ग्राहरू मुस्ताङमा नै प्रति च्याङ्ग्रा ३५/४० हजारसम्म पर्ने बस्नेतले बताए ।
सरकारले यसपालि खसी बोकाको मूल्य जिउँदोमा रु. ६५० तोकेको भएता पनि सहुलियत बजारमा छुट सहित रु. ६४० पर्ने बताएको छ । गत वर्ष रु. ५५० मा बिक्री भएको खसी बोकाको मूल्य यसपालि ६५० पुगेको हो । यता विगतका वर्षमा ८०० मा बिक्री हुने च्याङ्ग्राको मूल्य पनि यसपाली रु. १२०० प्रति केजी पर्ने भएको छ ।
भक्तपुरमा खःमेय् व्वाकेगु मनाइँदै
मुगु दुर्घटनाका मृतक सबैको सनाखत
मुगु दुर्घटनाः २३ जनाको मृत्यु, घाइतेको उद्दारका लागि हेलिकप्टर घटनास्थलमा
सुर्खेतबाट मुगुतर्फ जाँदै गरेको ३९ यात्रु सवार बस दुर्घटना
पोखराबाट घान्द्रुकका लागि छुटेको जीप दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु
चाडपर्वकाे बेला यातायात व्यवसायीको इच्छाले गाडीभाडा बढ्नु दुखदः उपभाेक्ता